हाम्रो सिक्किम पार्टीले गऱ्यो छ उम्मेदवारको नाम घोषणा - खबरम्यागजिन
Homeखबरसिक्किमहाम्रो सिक्किम पार्टीले गऱ्यो छ उम्मेदवारको नाम घोषणा
हाम्रो सिक्किम पार्टीले गऱ्यो छ उम्मेदवारको नाम घोषणा
March 15, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि सिक्किम 0
भाइचुङले भने, ‘पार्टीका अधिकांश उम्मेदवारहरू युवा रहने छन्। हामी सिक्किममा नयाँ प्रकारले राजनीति गर्ने छौं। हाम्रो नारा नै नयाँ सिक्किम हो। हामी जात र हुद्दाको होइन, तर विकास मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा जाने छौ।’
गान्तोक, 15 मार्च।
हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) ले शुक्रबार आफ्नो छ जना उम्मेदवारको नाम घोषणा गरेको छ। राजधानी गान्तोकको विकासक्षेत्रस्थित पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा गरिएको हो।
उम्मेदवारहरूलाई एचएसपी कार्यकारी अध्यक्ष भाइचुङ भोटियाले खादा लगाइदिएर बधाई अनि शुभकामना दिए। एचएसपी अध्यक्ष डा. वीणा बस्नेतलाई पूर्व जिल्लाअन्तर्गत अप्पर तादोङ निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार बनाइएको छ।
एचएसपी उपाध्यक्ष डीएस लिम्बूलाई पश्चिम सिक्किमको याङथाङ निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला नारी अध्यक्ष कमला राईलाई दक्षिण सिक्किमको राङगाङ—याङगाङ, इन्द्रकुमार सूजीलाई पूर्वसिक्किमको वेस्ट पाण्डम, अनुस राईलाई पूर्व सिक्किमको नाम्चेबुङ र पूर्व मन्त्री आथुप लेप्चालाई उत्तर सिक्किमको जङ्गु निर्वाचन क्षेत्रको निम्ति उम्मेदवार चयन गरिएको छ।
कार्यकारी अध्यक्ष भोटियाले आगामी केही दिनभित्र पार्टीका सबै उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा गर्ने बताए। उनले सबै जाति र क्षेत्रलाई हेरेर आज छ जना उम्मेदवारको नाम घोषणा गरिएको बताए। उनले भने, ‘पार्टीका अधिकांश उम्मेदवारहरू युवा रहने छन्। हामी सिक्किममा नयाँ प्रकारले राजनीति गर्ने छौं। हाम्रो नारा नै नयाँ सिक्किम हो। हामी जात र हुद्दाको होइन, तर विकास मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा जाने छौ।’
अर्कातिर, उनले एचएसपीले मात्र सिक्किमे जनतालाई साँचो अर्थमा परिर्वतन दिन सक्ने दाबी गरे। एक प्रश्नको जवाफमा उनले आफूपनि चुनावी मैदानमा ओर्लिने बताए। यसैगरि, एचएसपी अध्यक्ष डा. बस्नेतले पहिलोपल्ट चुनावी राजनीतिमा आइरहेको बताउॅंदै एकदमै उत्साहित रहेको बताइन्।
यसपाली सिक्किमका जनता कुनै प्रकारको प्रलोभनमा नआएर सिक्किमलाई सही दिशामा अगाडी बढाउने सक्ने उम्मेदवारलाई चयन गर्नेछन् भनी उनले आशा व्यक्त गरिन्। उनले मतदान गर्न अघि एकपल्ट सिक्किम र सिक्किमेको भविष्यलाई सोच्ने आह्वान पनि गरिन्।
अन्ततः भाजपा र एसकेएमको फुस्क्यो लगनगाँठो : गोलेले भने- ‘हामी 32 मा 32 आसनमा चुनाउ लड्नेछौं
भूमिपुत्रको भूत !
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (29,657)